Apple inogovera nyaya yaBob March uye maponesa aakaita hupenyu hwake nekuda kweApple Watch | Ndinobva mac
Apple inogovera nyaya yaBob March uye maponesa aakaita hupenyu hwake nekuda kweApple Watch
Isu tato taura kakawanda nezvekuti Apple Watch yakwanisa sei ponesa hupenyu hwevanhu vazhinji nekuona matambudziko emoyo zvakafanana. Tiri mumwedzi wemoyo weApple (kunze kwemwedzi weChikwata) uye nekuwedzera ku dambudziko remwoyo wegore rino, iyo kambani yanga ichida shandisa nyaya yaBob March uyo akaponesa hupenyu hwake nekuda kwemoyo wekutarisa weApple Watch.
Lori Kurume akapa murume wake Bob, pagore rake regumi nemanomwe Apple Watch. Bob munhu wemitambo uyo kunyange muhudiki hwake akange amhanya hafu yemarathoni uye aidzidzira mamwe marudzi emitambo. Paakavhura chipo ndokuisa pawachi kekutanga, akaona kuti chaive nekwaniso yekuongorora kurova kwemoyo, uye kunyangwe kuita electrocardiogram. Mushure mekuita kwekutanga kumisikidzwa kwaidiwa naApple, akaburukira kubasa ndokunyora zviyero zvekutanga. Chimwe chinhu chakanga chisina kumira zvakanaka.
Wachi yacho yaiyera kurova 127 paminiti. Bob akafunga kuti hazvingadaro uye kuti chimwe chinhu chakakanganisika. Akazvipa mhosva padambudziko rekuyera wachi. Asi zvakadaro dambudziko raivepo rakavanda ipapo uye chero nguva raigona kutumira muridzi wayo kuchipatara. Gare gare, zuva iro, vaviri vacho vakaona kuwanda kwakadzikira kwekuverenga kwemoyo. “Ndakatanga kumhanya ikatanga kudzikira asi yakazodzoka kumusoro. Ndipo pandakaona kuti chimwe chinhu chingasave chakarurama.
Muchato uyu wakaona akafanana akafanana pamusoro pemazuva akati wandei anotevera, zvichikurudzira Lori kuti ita musangano wenguva dzose bvunzo dzemuviri.
Ndakafunga kuti chiremba achandiudza kuti ndiedze kufema, edza yoga, kudzora sodium kana chimwe chakadai. Pane kudaro, maminetsi gumi mushure mekusangana neni, Akanditora muambulance kuenda ku emergency emergency.
Vanachiremba vakawana arrhythmia Izvo zvakaita kuti moyo waBob umhanye. Vakati zvaiita sekunge anga achimhanya nhangemutange yakadzikama kwemavhiki mashoma apfuura uye kana akasiyiwa asina kugadziriswa, mhedzisiro yacho inogona kunge ichirwadza. Kutenda kuApple Watch, kuongororwa kwakaitwa nekukurumidza, zvichibvumira vanachiremba kuponesa hupenyu hwemudiwa wemitambo.
Arrhythmias ine njodzi uye kazhinji haioneke kusvika kunonoka.
Zvinoenderana neAmerican Heart Association, arrhythmia kazhinji inogona kuenda isingazivikanwe. Kana ikasarapwa, inogona dzimwe nguva kutungamira kune zvakakomba mamiriro, kusanganisira sitiroko. Apple iri kushanda pamwe nemasangano anotungamira ekutsvagisa kuitisa nhevedzano yezvidzidzo zvehutano zvemoyo izvo zvichiri kugamuchira vadzidzi kuti vaongorore kuti Apple Watch ingabatsira sei kutyaira zvakatowanda zvesainzi. Ivo vanosanganisira iyo Apple Moyo uye Motion Kudzidza, iyo Moyo Line Kudzidza, uye iyo University Hutano Network Moyo Kukundikana Kudzidza.
Kupindira kwaBob kwakafamba zvakanyanyisa uye ikozvino, mwedzi mishoma gare gare, adzoka kuzomhanya nembwa yake. Iye naLori vanotenda zvachose muchibvumirano chakaitwa neApple Watch uye kuti zvachinja sei ramangwana ravo. Lori akati:
Chaizvoizvo Tinofunga zvakaponesa hupenyu hwake. Hapana chinhu chakakura kupfuura icho.
Basa rakaitwa neApple Watch pane iyi nyaya rinorumbidzwa. Chakatanga sedhijimendi yekugona kugamuchira nekugadzirisa mameseji uye kudzivisa kuve nekutarisa ku iPhone nguva dzese chave chinhu chakaringana uye chakazviriritira chine hupenyu hwayo. Iyo inokwanisa kuona arrhythmias uye mamwe matambudziko emoyo. Zvimwe zvidzidzo zvinototi zvinogona kudzivirira uye nekupa yambiro mberi zviratidzo zvine chekuita neCOVID-19 nezvimwewo zvirwere zvinokanganisa kufema.
Inogona kunge iri chinhu chakakosha mune ramangwana kune avo vanotambura nezvimwe zvirwere uye kuti inoshanda sedziviriro kuitira kuti vanachiremba vagare vaine vanhu vanoongororwa pasina kudikanwa kwemidziyo hombe, yakakura uye inodhura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inogovera nyaya yaBob March uye maponesa aakaita hupenyu hwake nekuda kweApple Watch
Kana mutambo usina kunaka zvachose.
Apple inokumbira vanogadzira kuti vadzore iyo DTK Mac mini A12Z
Ruzhinji beta shanduro dzeMacOS Big Sur 11.3, iOS 14.5 uye watchOS 7.4 yave kuwanikwa